China Electric Suction Machine (mapatya chirongo) fekitari uye vagadziri | AngelBiss
AngelBiss Electric Suction Machine (mapatya chirongo) inoshandiswa kuyamwa akasiyana emvura, senge pus, phlegm uye ropa. Inonyanya kubatsira mukurapa mazino uye nechimbichimbi uye kamuri yekuvhiya.Yakagadzirirwa chaizvo mashandisirwo ane yakayerera kuyerera uye kumanikidza hunhu, inotakurika suction muchina inopa inokurumidza uye inoshanda nzira yekuchenesa ropa, kana imwe yekurapa mvura mukufambira mberi kwekurapwa kwamazino. Iyo ine maviri akasiyana marudzi maitiro emhando yezvigadzirwa: 25L & 30L. Iko kukura kukuru kwemabhodhoro maviri kunodzivirira iwe kudzokorora kupomba chiito. Uye iyo bhodhoro haina mvura uye inoshandiswazve. Ichaponesa nguva uye zviwanikwa.
Iyo yemagetsi yekukweva muchina inoumbwa neyakaipa kumanikidza pombi, isina kusimba yekumanikidza, chiratidzo chekumanikidza chisina kunaka, kuunganidza mudziyo wemidziyo, tsoka inofamba chinja, kesi. Uye icho chigadzirwa chinogona kusangana nemhando dzese dzezvipatara uye zvekurapa mayuniti chinodiwa cheanoshanda mukuvhiya kwekurapa, inokwezva hombe kuyerera zvinodiwa kune zvekurapa mayuniti ekuvhiya pus pus secretion neakasiyana ivhu kukwezva. Uye iri neyakagadzika dhizaini, yazvino dhizaini. Kubva pachimiro chose, chakanyanya kutsvinda chitarisiko.AndthisDouble musoro pisitoni yekupombi pombi inogamuchirwa seyakaipa kumanikidza, yakaderera ruzha .Iye zvakare haina mafuta.Iine anti overfiow chengetedzo mudziyo, basa rekuchengetedza riri nyore, haridi kuwedzera mafuta.
Uye zvakare ine maviri akasiyana oparesheni modhi, yemanyorero uye chinongedzo switch dzinoshandiswa panguva imwe chete.Iyo iri nyore kushanda.
Kuti uwane zvimwe kubvunza kana mubvunzo Nezve AngbelBiss Portable Suction muchina, ndapota taura nesu pa info@angelbisscare.com uye mumiriri anozotevera newe nekukurumidza sezvazvinogona.
1. Iyo yemagetsi yekutsveta muchina inoumbwa neyakaipa kumanikidza pombi, isina kusimba yekumanikidza regineti, isina kusimba yekumanikidza chiratidzo, kuunganidza mudziyo wemidziyo, tsoka chitiviri chinja, kesi.
2. Inogona kusangana nemhando dzese dzezvipatara uye zvekurapa zviyero zvinodiwa zvekurapa mukuvhiya kwekurapa, inokwezva yakakura kuyerera zvinodiwa kune zvekurapa zvikamu zvekuvhiya pus pus secretion neakasiyana ivhu kukwezva.
3. Vertical chimiro, moderm dhizaini, chitarisiko chakanaka.
4. Double musoro pisitoni yekupombi pombi inogamuchirwa seyakaipa kumanikidza, ruzha rwakaderera
5. Iine anti overfiow chengetedzo mudziyo, basa rekuchengetedza riri nyore, haridi kuwedzera mafuta.
6. Chinyorwa uye chinongedzo chinoshandiswa panguva imwe chete, nyore mashandiro.
7. Zvinoenderana nerudzi uye degree re eletice kuvhunduka kudzivirira, iyo yekutsveta muchina wakaiswa mukati me ini mhando yemidziyo uye B mhando application chikamu. Iyo yekumhanya modhi kuenderera kushanda, IPXO, kwete AP mhando uye APG mhando zvakajairika zvishandiso.
8. Chigadzirwa chinosangana nezvinodiwa neIEC60601-1, IEC60601-1-2, ISO 10079-1.
Negative kumanikidza muganho
Negative kumanikidzwa chinjika renji
Unganidzo mudziyo chinzvimbo
Hole (mhepo yemhepo) ≥35L / min
Chiteshi ≥30L / min
Chiteshi ≥25L / min
Pashure: Kufamba kweropa Oximeter
Zvadaro: Okisijeni Concentrator ANGEL-5S
External Oral kubvisa kubvisa Machine
Chipatara Kubvisa Machine
Chiremba Kubvisa Machine
Oral Kuvhiya kubvisa Machine
Kubvisa Compressing Machine
Vacuum Emergency Kubvisa Machine
Vacuum kubvisa Machine